GDHF oo soo saaray Jadwalka kama danbeysta ah ee doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
GDHF oo soo saaray Jadwalka kama danbeysta ah ee doorashada
Guddiga Doorashooyinka Soomaaliya ayaa shaaciyey Jadwalka rasmiga ah ee doorashada Soomaaliya, ka dib hal sano oo murann iyo is qabqabsi ah.
MUQGDISHO, Soomaaliya - War saxaafadeed ka soo baxay guddiga hirgalinta doorashooyinka ayaa lagu shaaciyay Jadwalka Doorashada Baarlamaanka Labada Aqal ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Sida lagu sheegay warka ka soo baxay Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federal (GDHF), jadwalkaan ayaa noqonaya midka ugu danbeeya ee doorashooyinka, kaas oo ilaalin doona shaxda hishiiski 29 Juun, habraacyaddii 17 Sebtember iyo 27 May, lagu gaaray Caasimadda.
Sida ku cad qodobka 2aad ee jadwalkaan, 17-ka ilaa 23-ka bishaan, ayaa laga rabaa Madaxweynaha Maamullada in ay guddiga u gudbiyaan liiska musharixiinta aqalka sare, halka 25-ka ilaa 28-ka la qabanayo doorashada aqalka sare.
Hadaba halkaan ka aqriso shaxda doorashooyinka ee dhawaan la soo saaray.